Semalt Spiega Perché Gli Esperimenti Mantengano EVita La Tua Oku-odwe ngaphambilini Di E-Commerce
I-E-commerce ibhekene nezinguquko ezinkulu kuzo zonke izici. Ukwethulwa kwe-virtualizinketho zokuthenga ezingokoqobo, izinhlelo zokukhokha mobile, i-SEO kanye nezindleko ezintsha ezivela ezikhulayo zifakazela ukuthi kuyoba inselelo kubazali abasha nabadala abadlali.
Amaklayenti athathwe ngokukhetha kwezinsizakalo ezinikezwa abanikazi be-intanethiizitolo. Ukuthuthukiswa kwezinto ezintsha kuthuthukise isinyathelo sokulethwa kwezinyathelo kanye nesivinini sezinsizakalo. Ngakho ukwamukelwa kwezinguquko kwezobuchwepheshe ukuziphatha komthengi futhi ushiya amapulatifomu e-intanethi ngesidingo sokuzama njengoba kuyindlela kuphela yokusinda.
u-Ivan Konovalov, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDividal, inikeza ukuqonda ukuthi ukuhlolwa kuthuthukisa kanjani imiphumela yakho ebhizinisini le-e-commerce.
Amabhizinisi e-E-commerce kumele afake ukuhlolwa okusheshayo nokuhlanganiswa
Amathuba ebhizinisini le-inthanethi eze futhi ahambe ngokushesha kakhulu. Njengomkhuba nesipiliyoni kokuboniswa kwamakhasimende ethu, kunesidingo sokumiswa ngokushesha kwamathuba ikakhulukazi uma ukukhuthazela komncintiswano kuphakeme.
Abanye abathengisi baye bathola ingqondo yokuhlola
Ngesikhathi abathengisi beplanethi ye-intanethi bezwa inselele yokwenza izimali eziqinile isikhathi sabo namandla ukuze bakwazi ukuzama imibono emisha, abanye abathengisi baye bathatha inselele. Ku-athikili yakamuva nge-Optimize kanye ne-E-mail, umthelela weBusiness-Impact of Experimentation 2017, amaphesenti angu-6 abaphendulile aqinisekisile ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angu-20 okukhulayebhizinisi labo le-inthanethi libangelwa ukuhlolwa..
Izinsuku zokukholelwa ezinhlelweni ezivivinywa kakade aziqinisekisi ukusebenzayebhizinisi. Ukuhambisa ngokuzama ukukhuthaza ukutholakala kwamasu emakethe e-intanethi angakwazi ukunqanda ukuncintisana kwabanye abadlaliembonini.
Qondisisa amathuba okulethwa ukuhlolwa
Kunezizathu zokuthi kungani ibhizinisi elijwayelekile le-inthanethi lihluleka ukukhula ngisho nesicelowe-SEO. Bamesaba ngoba ababuza imibuzo enzima, okuholela ekutholeni.
Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi abesabi ukubeka imibuzo enjalo futhi bahlanganyele ekuhloliseni, okubenza bathole amathuba amasha atholakalayo.Inzuzo yokuhlolwa ukuphendula imibuzo evulekile eholela ekutholeni ngaphandle kokwesaba ukwehluleka noma impumelelo. Ngokungafaniukuhlola lokho kuhlose ukuqinisekiswa kwe-theory ekhona, ukuzama ukuzama ukuletha imibono emisha etafuleni ngokuphenya umphumelawe-hypothesis enikeziwe.
Umbiko weziNdaba zoMphakathi wezeMidiya kaMeyi 2017 ubonise amaphesenti angu-88 wabathengisi abafisa ukukwenzaukusungula izinzuzo zokusebenzisa izikhangiso zenhlalo yomphakathi. I-SEO yesicelo, amapulatifomu ezokuxhumana nabantu inhle kokubili ukuhlolwa kanyeukuhlolwa kwamasu. Ukuhlanganiswa kokuhlolwa nokuhlola imibono emisha kuyindlela enhle kakhulu yokufeza impumelelo e-intanethiukusebenza.
Kudingeka ube nesineke
Njenge-SEO, ukusetshenziswa kokuhlolwa noma ukuhlolwa kwemibono emisha kanyeamasu yisisinyathelo esidinga ukubekezela ukuhlakulela isineke. Ukuhlolwa kulandela izinyathelo ezithile ekufezeni impumelelo. Laphokufanele kube isabelomali, umuntu obhekene nezinqubo ngenkathi usebenzisa i-MBO ohlelweni lokukhangisa inikeza amabhonasi ukusebenza kahle.Yazisa noma yimiphi imiphumela futhi wabelane ngolwazi nabanye.
Ukuze uthole imiphumela emihle yokumaketha, ukuhlolwa nokuhlolwa kumele kube kuhle futhilandela ukuphindaphinda ngokushesha. Lokhu kuququgquzela ukulungiswa kwamaphutha nokuhlelwa kabusha kwezindlela. Ukutholwa kokungafakiweamathuba, ukuzama, ukufunda nokuphindaphinda yi-new cyclic yefomula eqhubekayo ibuyekezwa nesiko eCommerceibhizinisi Source .